ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့သူ့ရဲ့မွေး နေ့ လေးမှာ ဘယ်သူမှ လက်ဆောင်မ ပေး ကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အိစိ ကွေး – XB Media Myanmar
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၂၁)ရက်နေ့ကတော့ သရုပ်ဆောင် အိစိကွေးရဲ့ အသက်(၂၀) ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ ဘယ်သူမှ လက် ဆောင် မပေးကြဖို့ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့ကတည်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာက နေ တဆင့် တော င်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
အိစိကွေးက သူ့ရဲ့မွေးနေ့ ဆိုပေမယ့်လည်း ဒီကာလ မှာ လူတိုင်းအလုပ်မကောင်းကြတဲ့အတွက် မိ ဘတွေရော ချစ်ရတဲ့သူရော ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေရော မိတ်ဆွေတွေရော အားလုံးကို လက် ဆောင်မပေးကြဖို့ အတွက် အားလုံးဘက်က ကြည့်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ မွေးနေ့လေး ကို သတိတရလေးနဲ့ ဆုတောင်း လုပ်ပေးကြ, အသိအမှတ်ပြုပေးကြရင် ကျေနပ်ပါပြီ လို့လည်း ရေးသားထားပါသေးတယ် .
မွေးနေ့မှာ အားလုံးနဲ့ ပုံမှန် ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေခွင့်ရရင်ကို တကယ် ကျေနပ်ပါပြီဖြစ်ပြီး အားလုံးကို အရမ်းချစ်တယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ် ။ ပရိသတ်တွေကတော့ အိစိရဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် လေး ကို အရမ်းကိုသဘောကျနေကြပြီး ချီးကျူးမှတ်ချက်လေးတွေရေးသားထားကြပါတယ် ။
Happy Birthday ပါ အိစိရေ .. မွေးနေ့မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ ပျော် ရွှင်စွာနေထိုင်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ Yaung Chi က လည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဒီေန႔ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔ကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ အိစိေ ကြးရဲ႕ အသက္ (၂၀) ျပည့္ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေန႔မွာ က်ေ ရာ က္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ေမြးေန႔မွာ ဘယ္သူမွ လက္ေဆာင္ မေပးၾကဖို႔ ဇန္နဝါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔ကတည္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာက ေန တဆင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာျ ဖ စ္ပါတယ္ ။
အိစိေကြးက သူ႔ရဲ႕ေမြးေန႔ ဆိုေပမယ့္လည္း ဒီကာလ မွာ လူတိုင္းအလုပ္မေကာ င္းၾကတဲ့အတြက္ မိဘေတြေရာ ခ်စ္ရတဲ့သူေရာ ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ေတြေရာ မိတ္ေ ဆြေတြေရာ အားလုံးကို လက္ ေဆာင္မေပးၾကဖို႔ အတြက္ အားလုံးဘက္က ၾကည့္ၿ ပီးေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ ေမြးေန႔ေလး ကို သတိတရေလးနဲ႔ ဆုေတာင္း လုပ္ေပးၾက, အသိအမွတ္ျပဳေပးၾကရင္ ေက်နပ္ပါၿပီ လို႔လည္း ေရးသား ထား ပါေသးတယ္ .
ေမြးေန႔မွာ အားလုံးနဲ႔ ပုံမွန္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနခြင့္ရရင္ကို တကယ္ ေက်နပ္ပါၿပီျဖစ္ၿပီး အားလုံးကို အရမ္းခ်စ္တယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္ ။ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ အိ စိရဲ႕ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ ေလးကို အရမ္းကိုသေဘာက်ေနၾကၿပီး ခ်ီးက်ဴးမွတ္ခ်က္ေ လးေတြေရးသားထားၾကပါတယ္ ။
Happy Birthday ပါ အိစိေရ .. ေမြးေန႔မွသည္ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထိ ခ်စ္ ရတဲ့သူေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ ႐ႊင္စြာေနထိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေ ယာက္ျဖ စ္ပါေစလိုYaung Chiကလည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေ နာ္